Danjirihii Turkiga ee Somalia oo soo jeediyey in aan la ”dhayalsan” hadalka Siciid Deni | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Danjirihii Turkiga ee Somalia oo soo jeediyey in aan la ”dhayalsan” hadalka...
Danjirihii Turkiga ee Somalia oo soo jeediyey in aan la ”dhayalsan” hadalka Siciid Deni
(Ankara) 22 Feb 2021 – Danjirihii hore ee Turkiga u fadhiyey Somalia Dr C. Kani Torun ayaa soo jeediyey in aan la dhayalsan hadalka MW Puntland ee Siciid Deni.
Danjirihii hore ayaa hadalka Deni ku tilmaamay mid ”baraarug” u noqon kara beesha caalamka oo uu ugu baaqay inay tillaabo qaadaan inta goori goor tahay.
”Afrika uma baahna kali talis kale iyo dagaal sokeeye oo dhiigle ah. Beesha caalamku waa inay tillaabo deg deg ah qaaddaa.” ayuu soo jeediyey Dr Torun oo aan warka qar qarin.
Dr Torun ayaa ka mid ah dadka sida hoose ula socda arrimaha Somalia, maadaama uu Muqdisho fadhiyey dhowr sano oo uu Danjire ka ahaa.
Turkiga ayaan caadiyan aragtidiisa gaarka ah muujinin, waloow uusan Torun hadda Turkiga si rasmi ah u metelin.
Warkan ayaa daba socda war uu xalay sheegay Siciid Deni oo moowjado anfariir ah u diray bulshada kuwaasoo ku saabsan inuu MW Farmaajo kula kajamay hadallo reeraysan, waloow aan la hubin isna aanu caddayn keenin.
Previous articleTOOS u daawo: Arsenal vs Manchester City – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleInta ra’yi oo ka dhalatay hadalkii Deni & hal arrin oo ay adag tahay in dib loo arko